Cunsuriyiin weeraray xarun lagu haayo dhalinyarada qaxootiga | Somaliska
Koox cunsuriyiin ah ayaa weeraray xarun lagu hayo caruurta magangalyo doonka ah oo ku taal xaafada Solna ee Stockholm, ku dhawaad 30 qof ah oo ka tirsan urur cunsuri ah oo lagu magacaabo Nordisk Ungdom ayaa ukun ku tuuray xarunta iyagoo sidoo kale aflagaado u geystay dhalinyarada halkaas ku nool. Cunsuriyiintaan ayaa weerarka soo qaaday ka dib markii lagu eedeeyay dhalinyarada halkaas ku nool in ay falfal xumo kula keceen gabdho yaryar oo 11 iyo 12 sano jir ah, isbuuc ka hor ayaa 5 ilaa 7 ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah ee halkaas ku nool ayaa la sheegay in ay gabdhahaas da'da yar ay taataabteen mar ay ku dabaalanayeen meesha lagu magacaabo HusbyBadet balse aysan kufsan. Arinta ayaa laga badbadiyay iyadoo goobaha lagu sheegeysto ee internetka la galiyay in 30 wiil oo ku nool goobtaas lagu haayo caruurta soo galootiga ah ay kufsadeen labada gabdhood. Booliska ayaa sheegay in arintaas ay tahay ka badbadis. Dhalinyarada xumeeyay gabdhaha yaryar ayaa booliska loo gudbiyay dacwo ka dhan ah. Cunsuriyiintaan goobta soo weeraray ayaa ku qaylinayay ku laabta dalkiina iyo hadalo kale oo ka dhan ah dadka madoow.
Cunsuriyiin weeraray xarun lagu haayo dhalinyarada qaxootiga
Koox cunsuriyiin ah ayaa weeraray xarun lagu hayo caruurta magangalyo doonka ah oo ku taal xaafada Solna ee Stockholm, ku dhawaad 30 qof ah oo ka tirsan urur cunsuri ah oo lagu magacaabo Nordisk Ungdom ayaa ukun ku tuuray xarunta iyagoo sidoo kale aflagaado u geystay dhalinyarada halkaas ku nool.
Cunsuriyiintaan ayaa weerarka soo qaaday ka dib markii lagu eedeeyay dhalinyarada halkaas ku nool in ay falfal xumo kula keceen gabdho yaryar oo 11 iyo 12 sano jir ah, isbuuc ka hor ayaa 5 ilaa 7 ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah ee halkaas ku nool ayaa la sheegay in ay gabdhahaas da’da yar ay taataabteen mar ay ku dabaalanayeen meesha lagu magacaabo HusbyBadet balse aysan kufsan.
Arinta ayaa laga badbadiyay iyadoo goobaha lagu sheegeysto ee internetka la galiyay in 30 wiil oo ku nool goobtaas lagu haayo caruurta soo galootiga ah ay kufsadeen labada gabdhood. Booliska ayaa sheegay in arintaas ay tahay ka badbadis.
Dhalinyarada xumeeyay gabdhaha yaryar ayaa booliska loo gudbiyay dacwo ka dhan ah. Cunsuriyiintaan goobta soo weeraray ayaa ku qaylinayay ku laabta dalkiina iyo hadalo kale oo ka dhan ah dadka madoow.